Ogaden News Agency (ONA) – Hawlwadeenka iyo xubna ka socda OYSU Finland oo ka shiray qorshaha xuska OMD
Hawlwadeenka iyo xubna ka socda OYSU Finland oo ka shiray qorshaha xuska OMD
Waxaa maanta xarunta jaaliyadda Soomaalida Ogadeniya ee Helsinki ku shiray hawlwadeenka jaaliyadda iyo dhalinyarada OYSU. Shirkan oo ahaa mid loogu diyaargaroobayo munaasaba OMD xuska Maalinta Xasuuqa Ogadeniya oo lagu qaban doono Helsinki 28-29 ee bishan, hadii eebbe idmo.
Waxaa shirka furay gudoomiyaha jaaliyadda mudane Maxamed Muxyadiin halkaasoo lagu falanqeeyey arimo badan oo muhiim ah. Waxaa laga dhagaystay warbixin guud oo ku saabsan xaalada halganka gudo iyo dibadba, qiimeyn guud xaaladda jaaliyadda iyo wixii u qabsoomay jaaliyadda 3dii bilood ee ugu danbeysey.
Intaa ka dib waxaa laysla qaadaa dhigay qabanqaabada munaasabada OMD (Ogaden Massacre Day) oo laqaban doono dhamaadka bishan hadii Eebbe idmo wuxuuna socon doonaa 2maalmood oo Kala ah 28ka iyo 29bisha.
Munaasabadan oo qorshahu yahay in maalinta hore lagu martiqaado haayadaha xuquuqul insaanka qaar ka mid ah iyo axsaabta dalka, waana maalin loogu talogalay dadka ajaanibta ah laguna daawan doono filmkii Cabdullahi Xuseen oo u soo bandhigi doono mudane Cabdullahi Xuseen oo munaasabadda nagala soo qaybgali doona hadii eebbe idmo. Maalinta danbena waxaa luugu talo galay Jaaliyada af-Soomaaliga Ku hadasha.